वाराको दर्दनाक र विभत्स हत्या, चार महिना वित्यो तर प्रहरीले सुइको समेत पाएन किन ? « News24 : Premium News Channel
वाराको दर्दनाक र विभत्स हत्या, चार महिना वित्यो तर प्रहरीले सुइको समेत पाएन किन ?
प्रकाशित मिति : Apr 08, 2018
काठमाडौं । बाराको सिमरामा सुवेदी दम्पतिको हत्या भएको चार महिना वितिसक्दा पनि प्रहरीले पता लगाउन सकेको छैन । नेपाल प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान ब्युरो सिआईबी समेत हत्यारा पता लगाउन असफल भएको देखिएको छ ।
जितपुर सिमरा उप महानगरपालिकाको बजनी स्थित गाई गोठमा मसिर १५ गते राति दिपक सुवेदी र दिपिका सुवेदीको विभत्स हत्या भएको थियो । दिपकको शव आफ्नै गाई फारम भन्दा केहि पर परालको टौवानेर फेला परेको थियो भने उनको श्रीमतीको शव सुत्ने कोठामा फेला परेको थियो ।
श्रीमती दिपिकाको शरिरमा घरेलु हातहतियार प्रहार गरेको देखिन्थ्यो । घटना स्थलमा किला ठोक्ने हथौडा फेला परेको थियो । दिपिकाको टाउकोमा गम्भीर चोट लागेको थियो र शरिर रगतले लतपतिएको थियो ।श्रीमान् दिपकको पनि टाउको र शरिरमा चोट थियो । नजिकै काठको भाटा फेला परेको थियो र त्यतिबेलाको दृश्य हृदयविदारक र कारुणिक रहेको उनको परिवारले जनाएको छ ।
मंसिर १५ गते राती नै विभत्स रुपमा यी दम्पत्तिको हत्या गरिएको थियो । भोलिपल्ट विहान स्थानियले सुवेदी दम्पतिको शव देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए । घटनाको मुचुल्का सहित जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराले अनुसन्धान अघि बढायो । तर हत्यारा पत्ता नलागेपछि नेपाल प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले छानविन थालेको थियो । तर सिआइबीले पनि हालसम्म अपराधि पत्ता लगाउन सकेको छैन । पिडित परिवार न्यायको आशमा ४ महिना कटाइसकेको छ ।
निक्कै दर्दनाक अवस्थामा शव भेटिएपनि प्रहरीले हत्याराको ठोस पहिचान गर्न सकेको छैन । घटनाको बारेमा प्रत्यक्षदर्शी स्थानीयहरु नै आश्चर्य चकित छन् र चार महिनापछि पनि घटनालाई स्मरण गर्दा उनीहरुको स्वर मलिन हुन पुग्यो । जितपुर सिमरा उप महानगरपालिकाको बजनी भर भएका सुबेदी दम्पत्ति सामान्य कृषक हुन् ।
कृषि कर्म गरेर विगत १ बर्षदेखि गाउँमै गाइ फारम सञ्चालन गर्दै आएका थिए । दुवै जना गाईको हेरचाह गर्न भनेर गोठ नजिकै कोठा बनाएर बस्दै आएका थिए । घर नजिकै रहेको उक्त गाइ फारममा १७ वटा साना ठूला गाइ थिए । गाइफारम संञ्चालन गर्नुअघि उनीहरुले गाउमै दुग्ध डेरी पनि संचालन गरेका थिए । उनले बैकबाट १० लाख ऋण लिएर गाइफारम संचालन गरेका हुन् । तर बैकको ऋण चुक्ता गर्न नपाउदै उनीहरुको हत्या भयो ।
हत्या भएका सुवेदी दाम्पतिको परिवार अहिलेपनि डर र क्रासमा जीवन बिताई रहेका छन् । सुवेदी दाम्पतिको एक छोरी र एक छोरा छन उनीहरु पनि आमाबाबु गुमाउनुको पिडासंगै त्रास र आसमा बाचिरहेका छन् । घरमा ७२ बर्षिय बुढि आमा छिन् । यो उमेरमा निर्दोष आफ्नो छोरा बुहारी गुमाउनुपर्दाको पीडा निकै असैह्य छ ।
आमा औजकुमारी सुबेदी आफ्नो छोरा र बुहारीको हत्या भएको चार महिना बितिसक्दा पनि प्रहरीले हत्याराको पता लगाउन नसक्दा आफुहरु पिडित भएको गुनासो गर्छिन् । मृतकका दाजु जिल्ला प्रहरी र्कायलय बारा पुगेर घटना सम्बन्धी जानकारी माग्दा प्रहरीले भोली भोली भनेर आलटाल गर्दै आएको बताउँछन् ।
हत्या भएको समयमा गाउँमा राजनैतिक माहौल र चुनावको समय थियो । सो समयमा राजनीति गर्नेहरुले यो घटनाको संवोधन गर्ने भन्दै भोट मागेर हिडेका थिए । कसैले कृषक सहिद बनाउनु पर्छ त कसैले भएको ऋण माफ गराउछौँ भनेर प्रतिबद्धता पनि जनाएका थिए । तर अहिले यसबारे कसैले वास्ता नगरेको पिडित परिवार बताउँछन् । तर घटना भएको ४ महिनासम्म कुनै तथ्य बाहिर आउन सकेको छैन । घटनाको अनुसन्धानमा प्रह्री असफल बन्दा पिडित परिवार अहिले न्यायको पर्खाइमा छ ।
जिल्ला प्रहरीले पनि आवश्यक अनुसन्धान गर्दा हत्यारा र हत्याको कारण पत्ता लगाउन नसकेपछि नेपाल प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले अनुसन्धान थालेको थियो तर सिआइबीले समेत हत्याको कारण र हत्याराबारे कुनै तथ्य पत्ता लगाउन नसक्दा सिआइबी पनि यसमा असफल देखिएको छ । आफ्नो कर्म गरेर खाएका सुबेदी दम्पत्तिको अनाहकमा हत्या हुनुप¥यो । जुन घटना लामो समयसम्म रहस्यको गर्भमै रहँदा प्रहरीको अनुसन्धान फिक्का देखिएको छ ।
प्रहरीले घटना प्रति प्रहरी संबेदनशिल रहेको बताएपनि हालसम्म कुनै तथ्य बाहिर आउन सकेको छैन । जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराका प्रहरी प्रबतmा तथा प्रहरी नायब उपरिक्षक भुवनेश्वर प्रसाद साह घटना प्रति प्रहरी संबेदनशिल रहेको र अपराधिको नजिक पुगिसकेको दाबी गर्छन् । उनले हत्या काण्डको अनुसन्धान भईरहेकोले छिटै अपराधी पक्राउ पर्ने बताएका छन् ।
विभत्स रुपमा गरिएको हत्याको बारेमा समेत प्रहरी जिम्मेवार नदेखिएको परिवार र आफन्तको आरोप छ । गम्भीर हत्या जस्तो घटनामा लामो समयसम्म पनि सत्य तथ्य बाहिर नआउँदा प्रहरीप्रति स्थानीयको अविश्वास पैदा हुन थालेको छ । चुनावको माहोलमा आश्वासन बाडेकाहरुपनि पराइ बनेका छन् । यो परिवार निकै पीडामा छ ।
निकै गम्भीर र दर्दनाक यो घटनाको रहस्य चाँडै बाहिर आउनु जरुरी छ । प्रहरीले अनुसन्धानलाई चुस्त बनाई अपराधिलाई चाँडो भन्दा चाँडो कानुनी कठघरामा उभ्याउनुपर्ने जरुरी देखिन्छ ।